FANDONANA NY FIARANA DEPIOTE : Nahatsapa ny hadisoany ireo naratra
Tamin’ny alakamisy alina teo, tokony ho tany amin’ny 10 ora teo no nifandona ny fiara iray izay an’ny solombavambahoaka voafidy teto Toliara sy ny môtô iray, izay nentin’ny mpinamana roa, ka ny lahy no nitondra ny môtô ary ny vavy no nentina. 6 mars 2017
Nandeha mafy ity môtô ity ary avy hatrany dia nandona ilay fiara, vokany dia tapaka ny tongotr’ilay vehivavy, ary naratra ihany koa ilay lehilahy nitondra ny môtô. Nentina tany amin’ny hôpitaly avy hatrany izy ireo mba hotsaboina.
Mba hanajana ny fomba maha Malagasy sy ny fombafomba avy aty atsimo dia nitsidika ireo naratra ny Mpanolotsain’ny minisitra iray sy ilay namany tao anaty fiara, ka nanolotra vola enina tapitrisa Ariary, mba hanohizana ny fitsaboana. Nandritra ny famangiana nataon’ireto olona izay nitondra ny fiara no nilazan’ilay tanora nitondra môtô, fa azy ireo ny fahadisoana, ary tamin’izany ihany koa no nisaoran’izy ireo izany hetsika toy izany.
Tsara ny manamarika fa dia tamim-pilaminana fifampitsidihana teo amin’ny roa tonta ary tsy nisy ny rahoraho teo amin’ny an-daniny sy ny an-kilany. Marihina ihany koa fa tsy nitondra ary tsy tao anatin’io fiara io ny solombavambahoaka voafidy teto Toliara ary tsy teto an-toerana ny tenany.